अब जनताले परीक्षण गर्ने मेरो पालो : राजेन्द्र चौधरी – Chitwan Post
खैरहनी नगरपालिका–९, बस्र्यौली निवासी राजेन्द्रप्रसाद चौधरी सो क्षेत्रका ओझपूर्ण व्यक्तित्व बोकेका थारु नेता हुन् । ५४ वर्षीय चौधरीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले खैरहनी नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । २०३९ सालमा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगन्जमा आईएस्सी पढ्दादेखि नै नेविसंघको राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी स्वर्गीय समाजसेवी किशोरचन्द्र ढुङ्गानाको प्रेरणाले कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनी चूडामणि चौधरी, रामजी चौधरी, स्वर्गीय प्रेमबाबु अधिकारीको सरसंगत र राजनीतिक प्रशिक्षणबाट अघि बढ्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने चौधरी समुदायका प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनको ३० वर्षे राजनीतिक आरोहणका क्रममा ०४२ सालदेखि कांग्रेसका हरेक संघर्ष र आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक समर्पित व्यक्तित्व हुन् ।
आफूलाई बीपी कोइरालाका अनुयायी र सिपाही भन्न चाहने चौधरीले ०४६ को जनआन्दोलनमा पञ्चायती शासकको निर्देशनमा पक्राउ परी यातना भोगे । प्रजातन्त्र पुनबर्हालीपछि जेलमुक्त भएका उनी ०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा खैरहनी गाविसमा भारी मतका साथ उपाध्यक्षमा विजयी बने । पार्टीका दुई पटक जिल्ला सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, १२ औँ अधिवेशनमा महासमिति सदस्य र १३ औँमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् । उनी राजनीतिसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । भुवानी शंकर कलेजका संस्थापक उपाध्यक्ष, तथा निरन्तर सदस्य रहेका उनी थारु कल्याणकारी सभाको पार्षद एवम् केन्द्रीय आदिवासी जनजाति कार्यसम्पादन समितिको सदस्यको भूमिकामा छन् । खैरहनी, चैनपुर, कठार र कुमरोज गरी चार गाविस मिलेर बनेको खैरहनी नगरपालिकाको नाम राख्न पनि उनकै योगदान रहको छ । प्रस्तुत छ– स्पष्टवक्ता, विकासप्रेमी तथा जुझारु मेयरका उम्मेदवार चौधरीसँग चितवनपोट दैनिकका सहसम्पादक केशव भट्टराईले गरेको कुराकानी–
१) खैरहनी नगरमा कांग्रेसको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, चुनावी सरगर्मी कत्तिको बढेको छ ?
–निकै नै तातिएको अवस्था छ । खैरहनी नगरपालिकामा अलि ढिलो गरी टिकट उपलब्ध भएका कारण रात दुई गुना दिन चार गुनाको गतिमा लागिपरेका छौँ । निर्वाचन मिति छोटो भएकाले सम्भव भएसम्म टोलटोलमा पुगेर मतदातासँग भेटघाट गरिरहेका छौँ । कतिपय ठाउँमा पुग्न नसकिने र नभ्याउने अवस्था छ । हामी जे जति ठाउँमा घरदैलोमा निस्कियौँ, त्यहाँ कांग्रेसका पक्षमा जनमत बढेको र चुनावी सरगर्मीले घरघरमा कांग्रेसको चारतारे झण्डा र रुख चिन्ह अंकित झण्डा फहराइरहेको पाएँ, जसले कांग्रेसकै पक्षमा जनलहर बढेको महसुस गरेको छु ।
२) प्रचार अभियानमा व्यस्त देखिनुहुन्छ, मतदाताबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
–जब म मतदाताको घरदैलोमा पुगेँ मतदाताले आफूले रोजेको र खोजेकोजस्तो मेयर पायौँ भनेर खुसी साँटासाट गर्नुभयो । खैरहनीमा निश्चय नै यसपाली मेरै पालो थियो । ‘तपाईंजस्तो योग्य मानिस कांग्रेसले खोजेको थियो, पार्टीले सही निर्णय गरेको छ, जनताको मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईंप्रति हाम्रो विश्वास, सद्भाव र प्रेम छ’ भनेर मतदाताले जसरी खुलेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नुभयो । यसमा म औधि खुसी छु । उहाँहरुले यतिसम्म भन्नु भएको छ कि, ‘तपाईं कृषि पेसामै रहेर सरल जीवनयापन गनुभएको जनप्रिय नेता हुनुहुन्छ, राजनीतिमा सक्रिय रहेर पार्टी र जनताका लागि धेरै योगदान गर्नुभएको छ, हामी मतसहित आर्थिक, भौतिक सहयोगसमेत गर्न तयार छौँ ।’ एउटा उम्मेदवारका लागि यहाँभन्दा ठूलो आड–भरोशा र विश्वास अरु के हुनसक्छ र !
३) चौधरी समुदायबाट मेयरमा प्रतिनिधित्व गरिरहँदा चुनावी प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ?
–चुनाव हो प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविकै हो । एमालेले पूर्व सांसद लालमणिजीलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ, प्रतिस्पर्धा नै त छैन भन्न मिल्दैन । थारु समुदाय र यहाँका नगरवासीले यसपाली तपाईंकै पालो हो । तपाईंलाई नै भोट दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहनु भएको छ । लालमणिजीले आश्वासनबाहेक केही बाँड्नु भएन, अब परीक्षण गर्ने पालो तपाईंको हो भनेर मतदाताले नै उम्मेदवार छनौट गरिसक्नुभएकाले प्रतिस्पर्धामा म अगाडि नै छु ।
४) उम्मेदवारहरुको कसीमा तपाईं आफूलाई कति योग्य ठान्नुहुन्छ ?
–पार्टीभित्र पनि म योग्य प्रत्याशी भएर नै कांग्रेसले मलाई मेयरको उम्मेदवारमा उभ्याएको हो । पार्टीमा रहेर त्याग गरेको, सामाजिक योगदान गरेको, जनभावनाको कदर गर्दै आएको कारण म उम्मेदवारहरुको कसीमा अब्बल रहेको दाबी गर्न सक्छु । राजेन्द्र जे भन्छ– त्यो ढिलोचाँडो पूरा गर्छ । बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद, सुशीलजस्ता आदर्श नेताको संगत गरेको र उहाँहरुबाट प्रशिक्षित भएकोले कांग्रेसले कहिल्यै झुटा कुरा गर्दैन । असम्भव कुरा गरेर क्षणिक लाभ लिने काम पनि गर्दैन । मेरा प्रेरणादायी गुरूहरु स्वर्गीय समाजसेवी किशोरचन्द्र ढुङ्गाना, चूडामणि चौधरी, रामजी चौधरी, स्वर्गीय प्रेमबाबु अधिकारीको उत्तराधिकारी भएकाले गुरूहरुको मार्गनिर्देशअनुसार जनभावनाको सम्मान गर्छु ।
५) नगरवासीमा कस्तो प्रतिबद्धता बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको छ ?
–समृद्ध खैरहनी बनाउने मेरो प्रतिबद्धता छ । खैरहनी आफैँमा सुन्दर नगरी हो । किनभने उत्तरमा कंकाली डाँडा, दक्षिणमा राप्ती नदी र राष्ट्रिय निकुञ्ज, पूर्वमा राप्ती नगरपालिका र पश्चिममा रत्ननगर नगरपालिकाको बीचमा हामी छौँ । साविक खैरहनी, चैनपुर, कठार र कुमरोज गाविस मिलेर बनेको यस नगरीको नाम खैरहनी नै राख्न मैले संघर्ष गरेको हुँ । हाम्रो ऐतिहासिक पहिचान झल्काउने यो नगर अहिले पूर्वी चितवनकै प्रमु्ख व्यापारिक केन्द्र बनिसकेको छ । मेयरका रुपमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा यहाँको स्वास्थ्यलाई प्रमुख ध्यान दिने छु । यहाँको जनसंख्या निकै द्र्रूत गतिमा बढ्दे गैरहेको अवस्थामा यहाँका नगरवासीका लागि एउटा राम्रो हस्पिटल या हेल्थपोष्टको शैया वृद्धि गरेर आवश्यकीय स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध गर्ने छु ।
यहााका किसान दाजुभाइलाई आधुनिक कृषिमा आकर्षित गराउँदै अर्गानिक खेती गरी आयआर्जन बढाउन सहयोग गर्ने छु । विश्वव्यापीकरणको युगमा यहाँका उत्पादनहरु युरोपियन मुलुकसम्म निर्यात गर्न सक्ने गरी प्रवद्र्धन गर्ने छु । विद्यालयहरुमा गुणस्तर वृद्धि गरी प्राविधिक शिक्षाका साथै गरिब, विपन्न, उत्पीडित तथा आदिवासी सबै बालबालिकालाई अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययनको व्यवस्था गर्ने छु । टोलटोलमा वाईफाईको व्यवस्था गरी स्वदेश र परदेशमा रहेका स्वजनसँग आत्मीयता जोड्न मद्दत गर्ने छु । सार्वजनिक लाइब्रेरीको व्यवस्था, नदीनालामा जाली ढुङ्गा लगाउने र बूढीराप्ती र ढुङ्ग्रेखोलालाई पहिलेको अवस्थामा फर्काएर वातावरणीय जलक्रिडा गराउन बोटिङ सञ्चालन गर्ने, वृद्धवृद्धालाई वाद्यवादनसहित वृद्धाश्रम निर्माण, सहरलाई फोहरमुक्त गरी कम्तीमा दुईवटा सार्वजनिक शौचालय तथा तत्काल घुम्ती शौचालयको व्यवस्थापन गर्ने छु । सबैको मनोभावना र अभिव्यक्ति बुझेर उहाँहरुलाई चित्त बुझाएर एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्ने छु ।
६) मतदाताको भावना जितेर विजयी बन्ने सुनिश्चितता के देख्नुहुन्छ ?
–एक त म उहाँहरुले नै मन पराएको उम्मेदवार हुँ । मेरो स्वभाव र बानी व्यवहारबारे मतदातालाई राम्रोसँग जानकारी छ । किनभने मैले उहाँहरुको भावना जितेर काम गर्दै आएको छु । व्यक्तिगत रुपमा कुनै लोभलालच मसँग छैन । व्यक्तिगत, सामाजिक एवम् संस्थागत रुपमा मैले गर्दै आएका सामाजिक योगदानको मूल्यांकन गरेर नै मतदाताहरुले अब तपाईंको पालो भनेका हुन् । एमालेले ‘डिएसपी’ भइसकेको मान्छेलाई ‘सिपाही’को पदमा उठाएको भनेर जनताले भनिरहेका छन् । अहिले थारु समुदायको भावना पनि छताछुल्ल भएर पोखिएको छ । पूर्व माननीयलाई मैदानमा उतारेर समग्र थारुलाई नै निरुत्साहित पारिदिएको अवस्थामा निर्विकल्प अब जित्ने पालो राजेन्द्र चौधरीको हो । मैले जित्ने पूर्ण ग्यारेन्टी पनि छ ।
भरतपुर महानगरमा ६८४ उम्मेदवार